Tag: Sacuudiga | Sagal Radio Services
Wararkii ugu dambeeyay baaritaanka dilkii Jamal Kashoggi iyo caddeymo laga helay Qunsliyadda Sacuudiga
Waxaa weli socda baaritaanka halkii u ku dambeeyay Wariyihii reer Sacuudi Jamal Kashoggi, kaasoo la waayay wixii ka dmabeeyay 2-dii bishii October markii uu galay Qunsuliyadda Guud ee Sacuudiga ku lahaa magaalada Istanbul, si uga helo warqad cadeyn ah oo muujineysa inay kala tageen xaaskiisa hore.
Sacuudiga oo xuduuda u furaya Xujeyda ka imaanaya dalka Qatar
Sagal Radio Services • News Report • August 17, 2017
Dowladda Sacuudiga ayaa ku dhawaaqday inay fureyso xuduuda dhulka ee ay la wadaagto Qatar, si ay ugu ogolaato Xujeyda dalkaas ka imaaneysa inay ka soo gudbaan.
Madaxweyne Farmaajo oo booqosho rasmi ku jooga boqortooyada Sacuudiga
Madaxwaynaya Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo wuxuu caasumaad rasmi ah ka helay Boqorka Sucuudiga Boqor Salmaan Binu Cabdicasiis Aala Sucuud.
Sacuudiga oo ku eedeeyay Xuutiyiinta Yemen in gantaal ku soo rideen magaalada Makka
Sagal Radio Services • News Report • October 28, 2016
Sacuudiga ayaa ku eedeeyay Jabhada Xuutiyiinta Yemen in gantaal kuwa ridada dheer ah ay u soo rideen dhinaca magaalada barakeysan ee Makka al Mukarama.
Boqolaal Soomaali ah oo si xun ugu dac darreysan xabsi ku yaala Sacuudiga
Ilaa iyo 700 oo Soomaali ah oo isugu jirta haween, rag iyo caruur ayaa ku xiran xabsi ku yaalla magaalada Jeddah ee dalka Sacuudiga halkaas oo ay si xun ugu dac darreysanyihiin.
Haweenka Sacuudiga ayaa markii u horeysay u dareeri doona doorashooyinka dowladaha hoose ee dalkaas, iyadoo tallaabadan ay tahay mid Boqortooyada ku dooneyso in haweenka ay qeyb ka noqdaan siyaasada.
Madaxweyne Xasan iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray Boqortooyada Sacuudi Carabiya (Sawirro)
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa xalay gaaray magaalada Riyadh ee Boqortooyada Sacuudi Carabiya, halkaasoo si diiran loogu soo dhoweeyay.
Weerar ismiidaamin ah oo lagu qaaday masjid ku yaal Sacudi Carabiya
Ugu yaraan 15 ruux ayaa ku geeriyootay sagaal kalana waa ay ku dhaawacantay kadib markii qof isa soo miidaamiyay uu isku qarxiyay masjid ku yaal dalka Sacuudi Carabiya.
Boqorka Sacuudiga oo diiday inuu ka qeyb gallo shirka Mareykanka iyo Dalalka Khaliijka
Boqorka Sacuudiga Carabiya Boqor Salman ayaa diiday inuu ka qeyb galo shirka ka dhici doono Camp David ee dhex mari doona Mareykanka iyo wadamada Khaliijka.
Sacudi Carabiya oo beenisay inay geysay ciidamo dhulka ka dagaalama dalka Yemen
Boqortoyada Sacudi Carabiya ayaa beenisay in ciidamo ka dagaalama dhulka ay geysay dalka Yemen si ay u xoojiso ciidamada daacada u ah madaxweynaha dalka Yemen.
Sacuudiga oo hakisay duqeymaha Yemen, si diyaarado gurmad sida ay u gaaraan
Dowladda Sacuudiga ayaa ku dhawaaqday inay hakisay duqeymaha ay Yemen ka wado, xilli Jabhadda Xuutiyiinta ay sii wado dagaalkeeda ku wajahan inay qabsato magaalada dekeda leh ee Cadan.
Sacuudiga oo muddo kooban hakisay duqeymaha ay ka wado Yemen
Dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay in waqti kooban ay joojineyso duqeymaha ay ka wado dalka Yemen, kaasoo ka dhan ah Jabhada Xuutiyiinta Yemen.
Dowladda Sacuudiga oo qaaday howl galo milateri ka dhan ah Jabhada Xuutiyiinta Yemen
Dowladda Sacuudiga ayaa ku dhawaaqday inay qaaday howl gal milateri oo ay ku jiraan weerar cirka ah oo ka dhan ah Jabhada Xuutiyiinta shiicada ee isku dayaya inay la wareegaan guud ahaan dalka Yemen.